Ixesha kunye nabahlobo 4
Kwindibano yengokuhlwa edlulileyo umbuzo ubuziwe: Ngaba i-Theosophist isidlo okanye inyama yokutya?
I-theosophist inokuba itya inyama okanye imifuno, kodwa ukutya imifuno okanye ukutya inyama akusayi kwenza luhlobo olunye. Ngelishwa, abantu abaninzi bacinga ukuba i-quine sine engeyoyabomi bokomoya yinto ye-imifuno, ngelixa ingxelo enjalo iphikisana neemfundiso zabafundisi bokwenyani bokomoya. “Asikokungena emlonyeni okumenza inqambi umntu, kodwa okuphuma emlonyeni, kuko okumenza inqambi umntu,” utshilo uYesu. (Mat.xvii.)
'Ngaba ungakholelwa ukuba uhlala emahlathini amnyama, ngokuzimela ngasese nangaphandle kwabantu; Musa ukukholwa ukuba bubomi kwiingcambu nakwizityalo. . . .Umntu ozinikeleyo, ukuba oku kuya kukukhokelela kwinjongo yenkululeko yokugqibela, "yatsho iNtetho yokuThula kwesono. Umntu olawula imo yokucinga kufuneka asebenzise olona luvo kwaye uhlala elawulwa sisizathu sokukhathalela impilo yakhe yengqondo kunye nengqondo. Ngokumalunga nomba wokutya umbuzo wokuqala afanele azibuze wona uthi "kukuphi ukutya okufunekayo ukuze umzimba wam uhlale usempilweni? Xa efumanisa oku ngokuvavanya makamthathe ukutya oko amava kunye nokubonayo akubonileyo ukulungelelaniswa ngakumbi neemfuno zakhe zomzimba nezengqondo. Iya kuthi ke ingathandabuzi into yokutya oyakukutya, kodwa ngokuqinisekileyo ayizukuthetha okanye icinge ngenyama yenyama okanye eyemifuno njengemfundo ye-theosophist.
Ingaba i-theosoph yeyona nto ingayibona njani i-theosophist kwaye isadla inyama xa siyazi ukuba iminqweno yesilwanyana idluliselwa kwinyama yesilwanyana ibe isidumbu somntu odlayo?
Ingcinga yokwenyani yokwenyani ayinakuze ibhengeze. Maninzi amalungu e-Theosophical Society kodwa bambalwa kakhulu i-theosophists kuba ifilosofi yile, njengoko igama lisitsho, umntu ofumene ubulumko bobuThixo; Umntu ohlanganiswe nguThixo wakhe. Xa sithetha nge theosophist yokwenyani, kuya kufuneka sitsho umntu onobulumko bobuThixo. Ngokubanzi, nangona engachanekanga ngokuchanekileyo, nangona kunjalo, intetho ye-theosophist lilungu lombutho we-Theosophical. Lowo uthi uyayazi iminqweno yesilwanyana ukuba sidluliselwe emzimbeni womntu osityileyo siyangqina ngento ayithethayo. Inyama yesilwanyana lolona hlobo luphucukileyo nolugxile kubomi bokusetyenziselwa njengokutya. Oku kufanekisela inkanuko, ngokuqinisekileyo, kodwa umnqweno wesilwanyana esikwimo yaso yendalo ungaphantsi ko-Bain kunokuba unqwenela umntu. Umnqweno ngokwawo awuyonto imbi, kodwa iba mbi kuphela xa ingcinga egwenxa imanyene nayo. Ayisiyiyo inkanuko ngokwayo engendawo, kodwa iinjongo ezimbi ekubekwa kuyo ingqondo kwaye zinokufaka ingqondo, kodwa ukutsho komnqweno wesilwanyana njengento etshintshelwe emzimbeni womntu yinto ingxelo engachanekanga. Umbutho obizwa ngokuba yi-kama rupa, okanye umzimba womnqweno, oqinisa umzimba wesilwanyana, awunxibanga kwinyama yesilwanyana emva kokuba efile. Umnqweno wesilwanyana uhlala egazini lesilwanyana. Xa isilwanyana sibulawa, umnqweno-umzimba uphuma emzimbeni wayo wenyama negazi lobomi, ushiya inyama, yenziwe ziiseli, njengendlela yobomi ehlanganisiweyo esetyenzisiweyo yeso silwanyana sisuka kubukumkani bemifuno. Umntu otya inyama unelungelo elifanelekileyo lokuthetha, kwaye abe nengqondo ethe xa ethe, ukuba le imifuno izityisa ngokwayo ngeprisic acid ngokutya i-lettuce okanye nayiphi na enye into enetyhefu egcwele imifuno, kunokuba imifuno inokuthi ibe njalo kwaye ngokuchanekileyo yatsho ukuba inyama etya inyama ibisitya kwaye ithathe iminqweno yezilwanyana.
Ngaba akuyinyani ukuba i-yogis yaseIndiya, kunye nabantu bafezekisiweyo, bahlala kwimifuno, kwaye ukuba kunjalo, ngaba abafanele bathuthukise inyama baze baphile kwimifuno?
Kuyinyani, ukuba uninzi lwee yogis azidli nyama, kananjalo azenzi izinto zokomoya ezinkulu, kwaye ezihlala zihlala zodwa ngaphandle kwamadoda, kodwa ayilandeli loo nto kuba ziyenzile, bonke abanye kufuneka bayeke inyama. Aba bantu abanazo izinto zokomoya kuba bahlala kwimifuno, kodwa batya imifuno kuba banokuyenza ngaphandle kwamandla enyama. Kwakhona kufuneka sikhumbule ukuba abo bafumeneyo bahluke ngokupheleleyo kwabo bazama ukufikelela, kwaye ukutya komnye akunakuba kukutya komnye kuba umzimba ngamnye ufuna ukutya okuyimfuneko kakhulu kuwo ukuze ugcine impilo. Kuyanovelwano njengokuba kusenza intlekisa ukubona ukuba okona kubalulekileyo kubonwa ngulowo ubonayo kunokwenzeka ukuba ucinge ukuba unokufikelela. Sifana nabantwana ababona into ekude kodwa abathi bayifikelela, bayibambe bayiqonde, bengalibazisi kumgama ongenelelayo. Kubi kakhulu ukuba abo bangaba ngabanomdla kwi-yogiship okanye kubuThixo akufuneki balinganise iimpawu zokomoya kunye nengqondo yokomoya yabantu abangcwele endaweni yokufaka ezona zinto zibambekayo ngokwasemzimbeni nangokwenyama kunye nezithethe, kwaye becinga ukuba ngokwenza oko, nabo baya kuba ngabobuThixo . Enye yezinto eziphambili kwinkqubela ngokomoya kukufunda okubizwa nguCarlyle "ukuLunga kwezinto okungapheliyo."
Ukuchaphazela imifuno kwimizimba yomntu, xa kuthelekiswa nokutya inyama?
Oku ikakhulu kugqitywa zizinto zokugaya ukutya. Ukugaya kuqhutywa emlonyeni, esiswini nasemathunjini emathumbu, ngoncedo lobukho besibindi kunye ne-pancreas. Imifuno igxunyekwe ubukhulu becala kwilitha lamathumbu, ngelixa isisu ngokuyintloko sisisitya esidambisa inyama. Ukutya okuthethwe emlonyeni kuyahlanganisana kwaye kuxutywe namathe, amazinyo abonisa imeko yendalo kunye nomgangatho womzimba ngokumalunga nowemvelo wokubambisa okanye wokuthandeka. Amazinyo abonisa ukuba umntu unesiqingatha sesibini se-carnivorous kunye nesinye kwisithathu se-herbivorous, oko kuthetha ukuba indalo imnike isibini kwisithathu senani lonke lamazinyo akhe okutya inyama kunye nesinye kwisithathu semifuno. Kwimizimba enempilo yendalo oku kufanele ukuba ibe kukudla kokutya kwayo. Kwimeko esempilweni ukusetyenziswa kohlobo olunye kungabandakanywa kolunye kuya kubangela ukungalingani kwezempilo. Ukusetyenziswa okukodwa kwemifuno kubangela ukuvutshelwa kunye nemveliso yegwele emzimbeni, nto leyo ezisa zonke iintlobo zezifo ukuba yindlalifa. Ngokukhawuleza emva kokuba ukubila kuqale esiswini kunye namathumbu ke kukho ukubekwa kwegwele egazini kunye nengqondo ibe ingalunganga. Irhasi ye-carbonic acid ephuhlisiweyo ichaphazela intliziyo, kwaye ke isebenza kwizihlunu njengokubangela uhlaselo lokukhubazeka emzimbeni okanye olunye ukuphazamiseka kwemithambo-luvo kunye nemisipha. Phakathi kweempawu kunye nobungqina bokutya imifuno kukungakhathali, ukuthoba, ukungcungcutheka, ukujikeleza kwengqondo, ukuthambeka kwentliziyo, ukungabikho kokuqhubeka kwengcinga kunye nokugxininisa kwengqondo, ukophula impilo eqinileyo, ukongamela umzimba, kunye nokuthambekela ubuncinci. Ukutya inyama kunika umzimba amandla endalo ayifunayo. Yenza umzimba ube sisilwanyana esomeleleyo, esisempilweni, esokwenyama, kwaye siyawakha lo mzimba njengenqaba engasemva apho ingqondo inokuthi ikwazi ukumelana nokuhlaselwa kobunye ubuntu bomntu esidibana nabo kwaye kufuneka babhekane nabo kuyo yonke idolophu enkulu okanye indibano yabantu .